Maitiro ekuti utambe sei MKV pane yako GNU / Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
MKV kana Matroska ndeye yakavhurika vhidhiyo mudziyo fomatiNaizvozvo, usasanganise neiyo codec, nekuti haisi. Iyo fomati inozivikanwa kwazvo nhasi yekugona kuve neakawanda vhidhiyo uye odhiyo, kunyangwe mifananidzo maratidziro uye zvinyorwa zvidiki mune imwechete faira. Nekudaro inovavarira kuve yepasirese fomati yekuchengetedza yeaudiovisual uye multimedia midhiya. Asi kana kugovera kwako kusisina mapakeji anodiwa, uchaona kuti haugone kutamba aya mavhidhiyo.
Kumwe kugovera kunosanganisira aya mapakeji pakati pezvakatemerwa izvo zvisina kuiswa nekumisikidza kana kungoti iwe haugone kana kuzviwana mu yako distro zvinyorwa, mune dzimwe nguva ivo vanoiswa ne default. Iwe unotoziva kare mabhenefiti eakanakisa VLC multimedia player, iyo inotsigira kuwanda kwemafomati uye inogara ichiita kuti hupenyu huve nyore kana zvasvika pakutamba mafomati akasiyana uye macodec.
1 Tamba MKV kuburikidza neVLC:
2 Isa macodec:
Tamba MKV kuburikidza neVLC:
Kunyangwe paine vamwe vatambi vekutarisa MKV mukuwedzera kune mamwe mavhidhiyo mafomati, ndinogara ndichikupa zano kuti usarudze VLC player sezvo iri yeimwe yeakanakisa multimedia players uye nekuwedzera kuve nezvakawanda mareferensi pane zviri pamutemo MKV nzvimbo kune iyo mutambi, achitivimbisa kuti ichashanda nemazvo pasina matambudziko. Izvi hazvireve kuti vamwe vatambi havashande zvakanaka, kana uchida iwe unogona kusarudza SMPlayer, iyo inoridzawo MKV.
Zvakanaka, iwe uchada VLC yakaiswa pane yako kugoveraKunyangwe hazvo isiri yega Linux inowirirana vhidhiyo inoridza iyo inogona kutamba MKV, asi ndiyo yakanakisa uye, ndinotenda, inofarirwa nevazhinji vevaverengi vedu. Unogona kuisa chirongwa nekuchikanda kubva pawebhusaiti yepamutemo ye VhidhiyoLAN kana kushandisa maneja wepakeji wako wekuparadzira, nekuti ichave iri mumatura sezvo ichizivikanwa kwazvo.
Kana uchinge waiswa, unogona kuona kuti kutamba .mkv mavhidhiyo hakushandi, uye izvi imhaka yekuti iwe unozodawo akati wandei ekuwedzera mapakeji ne maraibhurari anodiwa. Semuenzaniso, kana iwe ukashandisa Debian kana Ubuntu based distro, unogona kuzviita na:
Kana kunyangwe kuisa mapakeji aya kusiri kukushandira, tarisa kuti une iyomacodec akakodzera panguva imwe neimwe. Semuenzaniso, mune dzimwe nguva kana iwe ukashandisa Ubuntu ungangodawo iyo ubuntu-inorambidzwa-yekuwedzera package kana kutsvaga chaiko codec uye kurodha pasi kubva kune yepamutemo webhusaiti, isa codec-pack, nezvimwe. Semuenzaniso, kune Ubuntu iwe unofanirwa kumhanyisa inotevera mirairo:
Mukana wekushandisa Ubuntu mune yazvino vhezheni kana kana iwe uchifarira kuziva zita repakeji yeiyo zvakasiyana siyana Kubva kuUbuntu, unogona kushandisa unotevera kuraira kuti uwane iro chairo zita repakeji yezvekuwedzera zvinorambidzwa nekumisikidza panowanikwa mamwe macodec anodiwa.
Sezvandakambotaura pakutanga, MKV haisi codec vhidhiyo sekufunga kwevamwe. Tinofanira kusiyanisa mafomati emidziyo, codec uye fomati faira. Iyo faira inomiririrwa neiyo icon yevhidhiyo iri kubvunzwa, ndiko kuti, iri seti yedata inogona kuwanikwa mune yefaira system. Asi mukati mefaira irori mune mudziyo unenge uine ruzivo kana zvirimo, mune izvi unenge uri mufananidzo uye data rezwi rinoumba vhidhiyo. Pekupedzisira isu tine iyo codec, iyo isiri chimwe chinhu kunze kweiyo algorithm yekukodha uye kugadzirisa izvo zvirimo mumudziyo. Codecs anogona kunge ari ese odhiyo uye nezwi.
Naizvozvo, kunyangwe tiine mutambi anoenderana neMKV uye kuwedzerwa kweiyo .mkv faira kunozivikanwa zvakakwana, tinogona kuona kuti hatigone kutamba vhidhiyo iri mubvunzo, uye imhaka yekuti izvo zvirimo hazvigone kudzvanywa uye kudomwa zvakanaka, nekuti system haina iyo algorithm inokwanisa kuidudzira. Semuenzaniso, tinogona kuwana vhidhiyo inoonekwa asi isinganzwiki (codec isipo odhiyo) kana kunzwika asi kusingaonekwe (vhidhiyo codec isipo).
Kune akawanda, asi lmacode akajairika iyo yatinogona kuwana yeMKV uye iyo yatinofanira kunge takaisa kuti ishande nemazvo ndeiyi: mp3, divx, mp4, h. 261, h. 262, xvid, nezvimwe. Dzimwe dzadzo dzinogona kuwanikwa pakati pemapakeji akadzivirirwa atakambotaura nezvake kare mu distros, kana mumapakeji akaita seW32Codecs yeLinux.
Kana isu tiine zvese izvi kuenda, zvese zvinofanirwa kushanda nemazvo. Nenzira, kana iwe usingazive codec ine odhiyo kana vhidhiyo faira rauinaro, unogona kushandisa zvirongwa senge media info, iyo ingave yakaenzana neWindows GSpot kuwana codec ruzivo. Unogona kuitora kubva pa nzvimbo yepamutemo kana kuiisa pamwe nemaneja wepakeji weiyo distro yako, nekuti kazhinji iri muzororo.
Kune yako kumisikidza uchishandisa nzira yepasirese, kana tango tora webhusaiti uye kurodha tarball, tinogona kuita kuti ishande ne:
Kana mudanho rapfuura tikasapfuudza kune dhairekitori rezvinyorwa sezvatakaita, taizofanira kuzviita kubva kwatinazvo, asi nekudaro pakubata kwadzo isu isu tinokumbira tichiteverwa nezita refaira Kutarisa:
Rimwechete iwe unowana ruzivo yeakakodzera odhiyo uye vhidhiyo macodecs zviri nyore kutsvaga mambure ekuti ungaite sei kurodha yakatarwa pasuru yedistro yako uye kuiisa. MuVhidhiyo # chikamu iwe unowana inodikanwa codec yevhidhiyo uye mu Audio # yezwi.
Usakanganwa kusiya yako inotsanangura nemazano ako uye kusahadzika ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuti utambe sei MKV pane yako GNU / Linux kugovera
"Codecs dzinogona kunge dziri dzemaviri uye kurira."
Ndinofanira here kuti "vhidhiyo" mune imwe yevaviri
George Fabian Mandoudis akadaro
Kutenda, zvakanyatsotsanangurwa uye zvakakwana kwazvo uye kuti ungawana sei codec.
ramba uchiita seizvi.
Pindura Jorge Fabian Mandoudis